डान्सबारमा दुई रात | मेरो कलम
~ स्मोक मेसिनबाट उडेको धुँवाले पुरै कोठा कुहिरो लागेजस्तै बनाएको थियो । रंगीन प्रकाशले उनको वक्षस्थल घरी देखिने र घरी छोपिने क्रम भएको थियो । ‘तेरा प्यार प्यार प्यार… हुक्का बार…’ यो गीतमा उनले बेली हल्लाउँदा । उन्मात नै अर्कै । निलो गाउनमा सेतो तिघ्रा देखाएर उनी नाच्दा म एकोहोरो हेरेको हेरै थिए ।
‘मु** । बियर तान । लामो जस्तो हेरेको छस् ।’ महेनले मेरो एकाग्रता भंग ग¥यो ।
अनि म पनि हल्का चुस्की लिदै हुक्का बारको तालमा नै रमे….।
ठमेलको इलाइट डान्स बारमा रातीको १० बजेको रौनक नै फरक थियो । केहीछिन अघि गोगंबुको मनकामना दोहोरी साँझमा र त्यसपछि त्यही दोहोरी साँझसँगै जोडिएको ग्रीनल्याण्ड डान्सबारमा बबाल गरेर महेन, विनय र म निस्केका थियौं । ३ जनाले दुइ ठाउँमा गरेर ७ वटा वियर खाएका थियौं होला ।
‘ठमेल जानुपर्छ ।’ महेन बोलीहाल्यो ।
‘होइन होटल जाउ अब’ विनयले जिद्दी कस्यो ।
म दोधारमै भएपनि होटलतिर नै जानुपर्ला भन्ने सोच बढि थियो । विहान कलेज पुग्नुपर्ने । थेसिसको गाइडलाइन क्लास हुन्छ भन्नुभएको थियो । सुरेश सरले ।
तल सडकमा कता जाने डिस्कस हुँदाहुँदै २ जना केटा हामी नजिक आएर कराउन थाले । मेरो पालो उनीहरुसँग झम्टन गए । तर उनीहरु विनयका साथी परेछन् । विनयले सम्झाएपछि हामी सबै ट्याक्सीमा महेनको करले ठमेल पुग्यौं । ट्याक्सीले ठमेलको भित्री चोक झारेको मात्र के थियो । दुइ मंगोलियन अनुहारका युवक नजिक आए ।
‘दाइहरुलाई केटी चाहिएको हो ? डान्सबार जानुहुन्छ ? बबाल बबाल केटीहरु छन् ।’
उनीहरुको यो आग्रहले सबैलाई एकैचोटी कौतुहलता जगायो ।
‘जा त विनय भित्र चेक गरेर आइजा ।’ भन्नलाई म नै कस्सिए ।
विनय डान्सबार भित्र छिरेर बाहिर नआउँदै महेनले सबैलाई भित्र जाउ भनिहाल्यो ।
साँघुरो भ¥याङबाट उक्लदै म्युजिकको आवाज कानमा ठोकिएको थियो । डान्सबारको ढोका खोल्दा ठूलै आवाज आइहाल्यो ।
‘ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरी छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरियाँ….ओे राधा तेरी झुम्का, ओ राधा तेरी टुम्का….पिछे पिछे सारी नजरियाँ…..’
स्टेजमा एकजना केटा र एउटी केटी नाचिरहेका थिए । हामी जाँदा जाँदै फ्लोरमा नाच्न थालिहाल्यौं । नाच्दै गर्दा विनयले एक केस टुबोर्ग बियर अर्डर ग¥यो ।
सोफामा बसेर अब हामी बियर खान थाल्यौं । सोफामा बसेपछि दायाँबायाँ केटीहरु आएर बस्न थाले ।
एउटीले हात समात्दै भनि दाइ म पनि वियर खाउँ । मैले नाइ भन्ने कुरै भएन । गिलासमा बियर आफै खनाइ अनि आफै सुर्य चुरोट अर्डर गरि । एउटा हातमा वियरको गिलास र अर्काे हातमा चुरोट तानिरहेकी त्यो केटीले आफ्नो परिचय दिएर मसँग परिचय माग्न थालि ।
म…. रुपा लामा ।
म कुमार । डान्सबारको केटीसँग कसले सही नाम भनोस् । मैले ढाँटिहाले ।
रुपाले दुई गिलास वियर खाइसकेकी थिई । आफ्नो बारेमा पनि थप बताई । घर खोटाङ । काठमाण्डौं आएको ३ बर्ष भएछ ।
वियरको नशा लागिरहेको थियो । रुपा उठेर । चेन्जिङ रुमतिर लागि ।
महेन पनि एउटा केटीको अँगालोमा रमाइरहेका थियो । विनय र उसका साथीहरु नाचिरहेका थिए ।
गीत चेन्ज भयो ।
‘तेरी प्यारका नशा कभी यार कभी बार… तेरा प्यार प्यार प्यार… हुक्का बार…’
स्टेजमा रुपा आएर नाच्न थाली । एकोहोरो हेरेको थिए । महेनले झस्कायो ।
डान्सबार भित्र हाम्रो गु्रप मात्र थिएन । अरु थुप्रै केटाहरु उफ्रेका थिए । कोही बियर खाँदै । कोही चुरोट उडाउँदै । केटीहरु पनि उस्तै । कोही कोही छामछुममा नै व्यस्त थिए । वेटरले खाली गिलास देख्नै नहुने । बोत्तलबाट वियर खनाइहाल्ने । खाली भयो की । अर्का पनि ल्याउ सर । वेटर भनिहाल्थो । व्यापार जो गर्नु थियो ।
मैले स्ट्रबेरी फ्लेबरको हुक्का अर्डर गरें । हुक्का तानेर धुँवामा उडाउँदै थिए । रुपा नजिक आइसकेकी रहिछे । हात तानी र तल फ्लोरमा नाच्न लगी । फास्ट ट्राकको चिक्नी चमेली….बजिरहेको थियो । केहीबेर नाचेपछि मैले उसलाई भित्तामा लगें । दुइटा हातले बिचमा पारेको थिए तर उ तल बसेर अँगालोबाट फुस्की । मैले फेरी ताने । यसपाली उसले मलाई शरिरमा सुम्सुमाएकी थिई ।
सानो कध भएकी रुपा, खासै राम्री भने होइन तर नाच्न भने राम्रो नाच्दीरहिछे । सौन्दर्य प्रशाधनका सबै सामग्री प्रयोग गर्छे होला । पुरै अनुहार कस्मेटिक ।
नाच्दानाच्दै उसले मेरो जिन्सको जिपरमा हात पुराई । मलाई असहज महशुश भयो । मैले अड मानेको देखेर उसले भनि । केटीले छोएको फस्ट टाइम हो र ?
हो । होइन । के भन्ने म अन्योलमा परें । अरु नै कुरा गर्दै यसपाली मैले नै उसलाई समाले ।
यतिखेरसम्म रातको १२ बजिसकेको थियो । मैले झोला बोकिरहेको थियो । ल्यापटप त्यसैमा थियो । महेनले दिएको ४४ हजार रुपैयाँ पनि । त्यसैले नाच्दा बस्दा त्यो झोला मैले छोडेको थिइन ।
विनयले भन्यो ‘अब जानुपर्छ । ढिला भयो ।’
भर्खर १ महिनाको छोरो र श्रीमतिलाई कोठामा कुराएर ८ बजे घर आउँछु भनेको विनय महेन र मेरो जीतले ठमेलको डान्सबारमा १२ बजेसम्म नाँचिरहेको थियो ।
अब भने बाउन्सरले नै डान्सबार बन्द हुनेबेला भयो भनेपछि बिल तिर्ने काउन्टरमा गयौं । बिल त १४ हजार उठिसकेको रहेछ । एउटा बियरको मूल्य ५ सय, हुक्काको ९ सय ९०, रेडबुलको पनि ५ सय । सुर्य चुरोट एउटा खिल्लीको ३० ।
‘कसले केके खाए । थाहै भएन । बिल त टन्नै उठ्यो नी ।’ म रिसाँउदै भने ।
‘अलिअलि डिस्काउन्ट गरेर दे न ।’ महेनले भन्यो ।
काउन्टरमा बस्ने केटाले आनाकानी गर्दै थियो । मैले झोलाबाट पाँचसयका २४ वटा नोट दिए ।
हाम्रै अगाडी शुरुमा हामीलाई डान्सबार छिराउने त्यो मंगोलियन केटाले ५ सय कमिशन पायो ।
ट्याक्सीमा बालाजुको होटलमा आइयो । जहाँ म बस्ने गर्छु । होटल विनयले अर्काे साथीसँग पार्टनरमा चलाएको थियो ।
कोठामा आएपछि मलाई त्यो १२ हजारको खुब माया लाग्यो । फोकटमा गएको जस्तो लाग्यो । हुन त मेरो पैसा गएको थिएन । तर पनि ।
म नेपाल आउँदै छु । म आएपछि खुब मोज गर्नुपर्छ हैं । महेनले दुबईबाट नेपाल आउनु २ दिन अघि मात्र भनेको थियो । एयरपोर्टमा लिन आउँछस् होला नी ।
मेरो ७ कक्षादेखीको साथी । क्लासको सेकेण्ड ब्याय । महेन । जोसँग भेट नभएको ११ बर्ष भएको थियो । एसएलसी दिएपछि हामी कता कता भयौं थाहा भएन । धन्न फेसबुक । जसले भेटाइदियो । क्लासमा म, नीराजन, महेन र विजय मिल्ने साथी थियौं । नीराजन पनि विदेश छ । फिनल्याण्ड । विजय, आँखा अस्पताल बागलुङमा डाक्टर ।
१ बजे नेपाल ल्याण्ड गर्ने भनेको थियो । म १ बजे तिर नै एयरपोर्ट गए । भित्र यताउती गर्दा आधाएक घण्टा त लाग्छ भनेर तर म पुग्दा त महेन बाहिर ट्याक्सी पार्किङमा आएर बसीसकेको थियो ।
एयरपोर्टबाट ट्याक्सीमा मेरो कोठामा आयौं । कोठामा आउनेवित्तिकै वियर खाने प्रस्ताव राख्यो । त्यसपछि मुड नै अर्कै । त्यही रात गोंगबु र ठमेल पुगेका थियौं ।
विहान हल्का ह्याङ्ग हानिरहेको थियो । टाउको नुहाएपछि फ्रेस जस्तै भइयो । फ्रेस त के भन्ने । टाउको दुख्न कम भयो । मलाई हिजो ठमेलमा १२ हजारको बिल तिरेको याद आयो ।
महेनले दुबईमा दुख गरेर कमाएको पैसा भन्ने पनि सम्झे । महेनलाई सोचेर नेपालीहरुले विदेशमा काम गरे वापतको अधिकाँश रेमिट्यान्स अनुउत्पादक क्षेत्रमा नै खर्च हुने रहेछ भन्ने उदाहरण पनि भेट्टाए ।
‘महेन डान्सबारमा बिल धेरै ति¥यौ यार ।’
‘नकरा न साला मैले कमाएर ल्याएको छु । मोज गर ।’ उसले भन्यो ।
‘तेरो बाजे । कमाएको छस र त जोगाउनुपर्छ । यसरी खर्च त गर्नुहुन्न । ’
‘भैगो ठूलो कुरा नगर । आज पनि जानुपर्छ । ’
मेरो कुरा उसलाई मन नपरेको मैले बुझे ।
दिनभरी उसको पार्सल ठाउँ ठाउँमा पुराएर सकेपछि फेरी साँझमा ठमेल जाउ भन्यो । मैले मानिन् । उसले जिद्दी ग¥यो ।
मलाई फकाउँदै उसले भन्यो । ‘आज धेरै नखाने । त र म मात्र जाउ । एकएक वटा वियर खाएर आउँला । ’
मैले समर्थन पटक्कै गरेको थिइन ।
‘हिजो त्यहाँ बस्दा मोबाइल नम्बर साटासाट गरेका थियौं । त्यसले आइजा भनेकी छे के । त्यसैले भनेकी धेरै नखानु । बरु एउटा वाइन मात्र लिनु । अनी गफ गरौंला । जाम न हिड । ’ उसले पुल्कदै भन्यो ।
‘बोको मोरा । दुबईबाट खरिएर आएको छस की के हो । ’
महेनले अति गरेपछि फेरी ठमेल गयौं । आज त पुरा फ्रेसमा ।
त्यही चोकमा पुगेपछि त्यही मंगोलियन केटा भेट भयो । यसपाली नाम सोधे । प्रविण रहेछ ।
‘दाइहरु त हिजो लास्ट झ्याप नी । मलाई पनि हातपात गर्नुभयो । त्यसले भन्यो । केटीहरुसँग पनि बस्नु भएन । आज त बस्नुपर्छ हैं । की लाने हो । कलेज पढ्ने केटीहरु पनि छन् । ’
महेनले सोधीहाल्यो । ‘कति भन्छन् ?’
‘गएर आएको ३ हजार । पुरै रात ६ हजार । ’
महेन मेरो मुखमा हे¥यो र फिस्स हास्यो मात्रै ।
‘चाहिन्न हामीलाई । हामी वियर मात्र खान आएको ।’ मैले भने ।
अनि हामी डान्सबार भित्र छि¥यौं ।
आज डान्सबारमा हिजोका जस्तो भिड थिएन । महेन र म । मात्र ।
छेउतिर एउटा केटा एक्लै वियर तानेको पनि देखियो ।
चहलपहल निकै कम, डान्सरहरु चुरोट उडाउँदै बसिरहेका थिए । एउटा केटा मात्र स्टेजमा नाचिरहेको थियो । नाचेको के भन्ने । हल्लेको थियो ।
महेन र म हिजोकै टेबलमा गएर बस्यौं । वेटर अर्डर लिन आयो । मैले एकछिन पछि गर्ने भने । १० मिनेट त्यसै बस्यौं ।
रुपा आज रातो स्कर्टमा रहिछ । मैले चिने । त्यसले पनि मलाई चिनि । तर मलाई नजिक हुन थिएन । महेन भने मोबाइलमा नम्बर डायल गरेर त्यही केटीलाई खोजिरहेको थियो ।
रुपा नजिक आइहालि । ‘आज केही नखाने ?’
‘खाने हो’ मैले भने ।
आफै २ वटा बियर अर्डर गरी । महेन त्यही केटीको खोजीमा थियो ।
तीनवटा गिलामा वियर हालेपछि । अरु दुइ केटी पनि थपिए । अनि रुपाले नै महेनले खोजेको केटीलाई बोलाएर ल्याई ।
चारजना केटी, हामी २ जना केटा । कसैले रेडबुल खान्छु हैं दाइ भन्दै थिए । कसैले सुर्य चुरोट अर्डर गर्नुस न भन्दै थिए । रुपाले फेरी एउटा बियर मगाई । सबैको एउटै उद्देश्य बिल बढाउने ।
हामी हिजोको जस्तो अवस्थामा थिएनौं । मैले महेनलाई पहिल्यै भनेको थिए । धेरै खाने होइन । त्यहाँ बिल मात्र बढाउने काम गर्छन । त्यसैले कसैलाई केही अर्डर गरिएन । रुपाले मगाएको वियर नै खान भन्यौं । तर उनीहरुले खाएनन् ।
मैले रुपालाई प्रविणले त तिमीलाई केके भन्दो रहेछ । मैले बाहिर तिमी छ्यौं भनेर सोधेको त्यसले त तिमीलाई त्यस्तो केटी पनि हेर्ने हो भन्यो भनेर लाइदिए । अनि रुपा प्रविणलाई गालीको कुनै शब्द बाँकी नराखी गाली गर्न थालि । धन्न प्रविण अगाडी थिएन ।
महेनलाई बोलाएको केटी, अलि बुढि रहिछ । महेन झस्के होलान् । मन नलाई नलाइ बोलेको थियो । बेला बेला मतिर हेर्दै थियो ।
रुपालाई अर्काे केटीले सरिता भनेर सम्बोधन गरेर बोलाई । त्यसले मलाई हेरेर हाँसेर गई ।
मैले मात्र त्यसलाई नाम ढाँटेको भनेको त त्यसले पनि मलाई ढाँटेकी रहिछ ।
आज डान्सबारमा जाने मुड नै थिएन । गैहाल्यो । बस्ने मुड बनेन ।
कतिखेर निस्कने भन्ने भैराखेको थियो । महेनले नै इशारा ग¥यो ।
बिल तिर्ने काउन्टरतिर लाग्दा । मधुरो बोलीमा त्यही महेनलाई बोलाएकी केटीले भनिन् । ‘बाहुनक्षत्री त छुच्चा हुन्छन के । ’
रिस उठेपनि फिस्स हाँस्दै २ हजारको बिल तिरेर हामी बाहिर आयौं । बाहिर प्रविण भेट भयो ।
‘दाइ । कतिको खानुभयो ?’
मैले ५ हजारको भनिदिए ।
‘केटी नलानी ।’ त्यसले भन्यो ।
‘केको केटी भन्छस् । आन्टी भन न । ’ महेन गर्जियो ।
साला खुब बोलाएकी छे भन्थिस यत्रो खाइस् ट्याक्सी भित्र छिर्दै मैले महेनलाई गाली गरें ।
बढि नकराई । अब गोंगबुको डान्सबार जानुपर्छ । ड्राइभरलाई गोंगबुतिर हिड्न आग्रह ग¥यो ।
मैले कोठामा जाउँ भन्दा सुने पो ।
गोंगबुको डान्सबार भित्र छिर्न लाग्दा मैले भने ।
‘महेन । यार भनेको मान न । मनै लागेको छैन के । ‘
खोइ त्यसको मन के भएछ । हुन्छ तनी नजाउ । भन्दै फर्कियो ।
गोंगबुबाट बालाजुसम्म हिडेर आइयो । बाटोमा स्कुलको कुरा गरियो ।
आज धेरै पनि खाइएन । धेरै खर्च पनि भएन ।
महेनले भोली घर जानुपर्छ भन्दै झोला मिलाउन थाल्यो ।
सुत्ने बेला फेरी भन्यो । ‘म फर्किएपछि मोज गर्नुपर्छ नी । ’
मैले फेरी डान्सबार सम्झिए । …………………..
~लेखक कारोबार दैनिकमा आवद्ध पत्रकार हुनुहुन्छ ।
घरैबाट अन्तराष्ट्रिय माष्टर कार्ड – पायोनियर
Nepali March 23, 2014
नीराजन शिरीष May 8, 2013 Log in to Reply
भनेपछि मुलाहरूले खुब मोज गरेछन् हैन त ?
प्रिय प्रकट यो कथानक प्रस्तुती रमार्इलो लाग्यो । सोचेँ – सायद म पनि भैदिएको भएँ, कत्ति रमार्इलो हुन्थ्यो होला नी है ?
gyanendra bikram Baniya May 8, 2013 Log in to Reply
प्रकट सर हजुर को कथा निकै उत्क्रिस्ठ लाग्यो। कथा बस्तु बास्तबिकता भयको ले आफैमा राम्रो छ। यहाले डान्सबारमा रु १६०००। गुमाउदा जति दुख लाग्यो हजुर लाई तेतीकै मलाई नि दुखित तुल्यायो किनकि हजुरले गुमाउनु भाको १६००० म आफैले गुमयाको अनुभूति भयको छ ।
Prateek Gautam May 8, 2013 Log in to Reply
story thorai bhayo….padu padu bhaira ko thiyo…doze nai pugena…….